Chọrọ enyemaka iji naghachi ehichapụ Pictures si My Micro SD Kaadị?
Naghachi ehichapụ Pictures si Micro SD Kaadị na 3 Nzọụkwụ
1 chọrọ enyemaka iji naghachi ehichapụ Pictures si My Micro SD Kaadị?
Hi niile, m nwere Micro SD Kaadị na m ehichapụ ụfọdụ foto site na ya. Nke a na e mere 1 afọ gara aga. M na-eche ọ ka kwe m omume iji weghachite ndị ehichapụ foto ndị si m Micro SD kaadị? Bụla ga-ekwu ga-nnọọ uru.
N'ezie, na-ehichapụ faịlụ na-bụghị n'ezie okụrede na-adịgide adịgide si gị Micro SD kaadị. Ha dị nnọọ ibu keerughi tupu ọhụrụ data na-edochi ha. N'ihi ya, n'agbanyeghị otú ogologo oge data anọwo na-ehichapụ si gị Micro SD kaadị, gị nwere ike omume weghachite ha ka ogologo oge gị na-enwebeghị ọhụrụ data n'ime kaadị.
I nwere ike igosi Micro SD kaadị ehichapụ foto mgbake na a data mgbake omume ọ bụrụ na ị na-eji kaadị ebe gị data furu efu. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ ihe ga-amasị m ka nwere ike ikwu maka gị. Nke a na usoro-enyere gị iji weghachite ehichapụ foto ndị si Micro SD kaadị na ala. Ihe niile ị chọrọ ime bụ na-agba ọsọ omume na iṅomi gị Micro SD kaadị, wee họrọ ehichapụ foto naghachi.
Nweta ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery si n'okpuru.
2 Naghachi ehichapụ Pictures si Micro SD Kaadị na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a ka na-amalite mgbake na Wondershare Photo Recovery maka Windows. Mac onye ọrụ nwere ike ime mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac Version.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị Micro SD kaadị na gị na kọmputa na igba egbe Wondershare Photo Recovery. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na Premiya window ịnọgide.
Cheta na: Jide n'aka gị Micro SD kaadị nwere ike maara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 A nzọụkwụ, ị ga-họrọ gị Micro SD kaadị na pịa "iṅomi" ịchọ ehichapụ foto.
Dị nnọọ ka anyị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, niile ike draịva na mpụga nchekwa ngwaọrụ na kọmputa gị ga-egosipụta site Wondershare Photo Recovery. Ọ bụrụ na ị pụghị ịhụ otu maka gị Micro SD kaadị, biko ego na njikọ nke gị Micro SD kaadị ọma.
Nzọụkwụ 3 Mgbe Doppler, hụrụ faịlụ ga-egosipụta na edemede na ụzọ. Ịnwere ike ihuchalu hụrụ foto ego ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa họrọ foto ị chọrọ na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa. Biko adịghị ịzọpụta natara azụ gị Micro SD kaadị mgbe mgbake.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi ehichapụ Pictures si Micro SD Kaadị